२५ दिन देखि बे’पत्ता दुइ बिबाहित महिला , बे’पत्ता हुनुको का’रण के ? सम्पर्कमा आउन अ’नुरोध - Samachar Post Dainik
२५ दिन देखि बे’पत्ता दुइ बिबाहित महिला , बे’पत्ता हुनुको का’रण के ? सम्पर्कमा आउन अ’नुरोध
समाजमा दिनानुदिन हरेक किसिमका घटनाहरु घटिरहेका हामीले सुन्न सक्छौ। धेरै जसो घटना त अझ श्रीमान र श्रीमती बिचको सम्बन्धलाई लियर बिभिन्न किसिमका हेडलाइन हरु बनिरहेका हामीले युटुब तथा बिभिन्न न्युज साइट मार्फत थाहा पाउन सकिन्छौ।
हो यस्तै यस्तै घटना घटेको छ तनहु , मुलपानीमा पनि ।
बिगत २ बर्ष अघि बिबाह बन्धनमा बाधिएकि सपना घिमिरे २५ दिन देखि घर बाट फरार भयाकी छिन।
उनको श्रीमान हरि बस्नेत रोजगारीकै शिलशिलामा भारत गयका थिय। १५ महिना पछि घर फर्किदा श्रीमती भने सम्पर्क बिहिन भयको ५ दिन बितिसकेको रहेछ।
घर परिवार संग भने आफ्नो माइत तर्फको बुवा बिदेश बाट आउदै र भेट्न जान्छु भन्दै घर परिवार संग बिदा लिएकि बुहारी सम्पर्क बिहिन हुदा मानसिक याताना त छदै छ तर दुखि र पिर चिन्ताले रुदै बसेका परिवारको आश भने बुहारी आउछे कि भन्ने आशा लियका छन्।
श्रीमती सपना कि साथि अमृता घिमिरेले फरार गराएको अड्कल काट्न सक्छौ। उक्त महिला अमृताले भने ज्याम मार्ने धम्कि समेत दिएकि छिन। अमृता घिमिरेले डेड बर्षकी छोरी अर्कैको हातमा छोडि भागेको पनि हामीलाई उनको शिमानाले बताएका छन।
खोजीकार्य गर्दै जादा काठमाण्डौ स्थित बलम्बु को सतुङ्गलमा रहेको आशिर्बाद भोजानलय एण्ड लजमा हामीले भेटेका थियौ। उक्त ठाउ बाट तनहु लिएर आउने व्यबस्था मिलायौ। तनहुको दमौली आइसकेपछि घर नजाने बताउदै होटलमा बसेका थिय।
भोलिपल्ट घरमै गइ पारिवारिक समस्याको समाधान गरौ भन्ने योजना बनाउदा उनीहरु भने घर नजाने तर प्रहरी कार्यालय जाने र आफ्नो समस्या उक्त कार्यालयमा बताउने सोच बनाए सपना र अमृताले।
शनिबारको दिन भयको कारण केटा पक्षको अविभावक भने ढिला भयको थियो। केटि पक्ष को आमा र बुवा भने आइसकेकाले श्रीमती र श्रीमान बीच मिलापत्र गराई फेरी नया जिन्दगि सुरु गर्ने स्वीकार्दै श्रीमान र सह परिवार कार्यलय बाट बाहिर निस्किए।
आरोपित महिला अमृता घिमिरे भने सपना लाइ लिएर फरार भईन। मिलापत्र भईसकेपछि पनि फरार भएका दुइ महिलालाई तनहुको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि तिब्र रुपले खोजिरहेको जानकारी हामीलाइ प्राप्त भयको छ।
कुनैपनि माध्यम बाट सम्पर्क हुन नसकेपछि मिडिया मार्फत सम्पर्क हुन सक्ने बताउदै हाम्रो कार्यालयमा फरार महिलाको श्रीमान हरि बस्नेतको उपस्थिति भयको थियो।
उक्त न्युज सार्बजनिक भयो भने ज्यान मार्ने भन्दै धम्की पुर्ण फोनहरु आइरहेका छन।
फोटोमा देखाइएका दुइ महिलालाई देख्नुहुने तथा भेट्नुहुने महानुभाबहरुले नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा ९८०४१९५३०३ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ।
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०३:२७